FAAH FAAHIN:- Dabkii xooganaa ee maanta ka kacay kaalin shidaal oo Magaaladda Muqdisho ku taala |
Thursday, November 28th, 2013 FAAH FAAHIN:- Dabkii xooganaa ee maanta ka kacay kaalin shidaal oo Magaaladda Muqdisho ku taala
ShareMuqdisho, Wacaal Media Dab aad u xoogan ayaa barqanimadii maanta waxa uu ka kacay kaalin shidaal oo ku dhaw Isgoyska KM-4 ee magaalada Muqdisho, waxaana halkaasi ka dhashay qasaare aad u xoogan.
Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in dabkaasi uu ka kacay Matoor dabdhaliye ah oo yaalay halka shidaalka uu ku xareesnaa oo Garaash ama Geerash weyn ahaa, waxaana halkaasi taalay hanta badan oo ay lahaayeen ganacsato Soomaaliyeed.
Goobta Garaashka ah ee Dabkaan qabsaday waxaa ku xareesnaa Gaadiid badan oo dhamaantood ahaa kuwo cusub, qaarkoodna la sheegay in halkaasi ay u yaaleen in la’iibiyo, hase ahaatee halkaasi ayeey ku baaba’een.
Dhismaha dabkaan uu ka kacay sidoo kale waxaa ku yaalay goobo ganacsi sida maqaaxi weyn oo aad looga canteen jiray, Farmashiyaal iyo meelo lagu iibiyo Biraha gaadiidka.
Dabka oo lama filaan ku bilawday ayaa isla si lama filaan ah waxa uu ugu baahay meelo badan oo aan la filaneen, iyadoona halkaasi ay ku waxyeeloobeen seddax qof oo shacab ah, waxaana soo gaaray dhaawac halis ah.
Mar qura waxaa ciraka isku shareeray Uuro Madoow badan oo dad badan ay kasoo arkeen meelo ka fog halka dabka uu ka kacay, waxaana intaasi ka dib bilawday gurmad aad u xoogan.
Durba goobta waxaa isku gadaamay ciidamo Booliis ah kuwaa oo doonaayay in dadka ay kabadbaadiyaan si aysan dhibaato uga soo gaarin iyo sidoo kale in la boobo hantida kale ee meesha ka dhaw.
Dabka oo daqiiqado socday marba marka ka dambeysana hawada uu isku shareeraayo,Fuustayaasha shidaalka ku keydsanaana ay circa usii boodayaan iyaga oo holcaaya ayaa halkaasi gurmad dam damis ah lala soo gaaray.
Waxaa dab damisyo keenay maamulka gobalka Banaadir, Shirkadda Hormuud Telecom, Turkiga, AMISOM, iyo kuwo kale oo laga keenay Dekada iyo Garoonka Magaalada Muqdisho.
Isbiirsi ka dib waxaa lagu guuleestay in la damiyo dabkii xooganaa, lagana bad baadiyo meeli kale oo dabka uu ku faafi lahaa, iyadoona dadaalkaasi uu meel maray.
Inta dabka uu halkaasi ka socday waxaa goobnta gaaray mas’uuliyiin ka mid ah dowladda Federaalka ee Soomaaliya, sida wasiiraka Arimaha gudaha iyo amniga Qaranka xukuumada Soomaaliya C/kariin Xuseen Guuleed, Taliyaha ciidamada Booliiska iyo xubno kale.
Jeneraal Saacid oo ah taliyaha Booliiska Soomaaliya ayaa saxaafadda si kooban kula hadlay markii lagu guuleestay daminta dabkaan.
“Waxaa mahad ah inaan ku guulaysanay daminta dabkii xooganaa ee maanta ka kacay kaalinka shidaalka, waxaana Alle ka sokoow u mahad naqayna shirkada Hormuud, Maamulka gobalka Banaadir AMISOM iyo Turkiga oo gacan ka geystay daminta dabkaan”
Dhacdadaan ma ahan tii ugu horaysa oo Muqdisho ka dhacday waxaana tii ugu dambeysay ay ka dhacay kaalin shidaal oo sidaan oo kale ah misane ku taalay Halka loo yaqaano Say biyaano ee magaalada Muqdisho.
Maanta waxaa halkaasi ku baaba’ay hanta aad u badan, hase ahaatee ilaa iyo haatan lama xaqiijin inta ay la egtahay hantida baaba’day, balse waxaa xaqiiq ah in caawa ay hanti la’aan fadhiyaan dad xalay hanta lahaa.
1 Response for “FAAH FAAHIN:- Dabkii xooganaa ee maanta ka kacay kaalin shidaal oo Magaaladda Muqdisho ku taala”
Meeraysane says:	November 28, 2013 at 11:24 pm	Inta dhimatay Allaha u naxariisto inta ku xoolo waayayna Allaha u cawil celiyo
Masuuliyiinta Hay’adaha amniga oo xilalka ay hayaan laga qaadayo
22 April,2014 at 19:59:36 / No comment Waxgaradka gobolka Gardafuu ee Puntland oo codsaday maamul cusub oo loo sameeyo gobolkaasi
22 April,2014 at 14:37:44 / No comment Xasan Sheekh: waxaa naga go’an in aan sii wadno la dagaalanka nabad diidka
22 April,2014 at 14:30:01 / No comment Latest News in English